उपेन्द्र यादव ज्यू,त्यसो भए नाकाबन्दी र हत्या किन ? « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
उपेन्द्र यादव ज्यू,त्यसो भए नाकाबन्दी र हत्या किन ?
काठमाण्डौ । मधेशका जानकार तथा चर्चित पत्रकार वीरेन्द्र केएमले सघिंय जमाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई निकै मार्मिक प्रशन गर्दे खुल्ला पत्र लेखेका छन । उनले फेसबुक मार्फत भिडियो समेत प्रस्तूत गरेका छन । केएमले लेखेका छनः
म तपाईंले पढाएको एउटा बिद्यार्थी हु “त्यो फोनेक्स साइकलवाला उपेन्द्र सर” अझै पनि मलाई याद छ, माले, एमालेको नेता भई चुनाव लडेको पनि याद छ, “चोर बोले जोर से” भन्दै मञ्चबाटै गजेन्द्रनारायण सिंहलाई गाली गरेको पनि याद छ । अझै पनि समय छ, जेका लागि यत्रो आन्दोलन भयो, नाकाबन्दी भयो, निर्दोष जनताले ज्यान गुमाए, पहिला संविधान संशोधनको माग पूरा होस् । अनि मात्र सबै मधेसवादी दल चुनावमा जानु उत्तम हुनेछ । निश्चित रुपमा चुनाव विरोधी कोही पनि छैनन् ।
महान क्रान्तिकारी मा. उपेन्द्र यादव सर,
-संविधान जारी भएदेखि नै मधेशी आन्दोलन किन ?
-पहाडी-मधेशी र भारतबीच समेत फाटो ल्याउने कार्य “नाकाबन्दी” किन ?
-यत्रो मधेशीको हत्या किन ? टिकापुर घट्ना किन ?
-गाउँ-गाउँमा प्रहरी चौकी जलाउने देखि एंम्बुलेन्ससम्मा आगो लाउने कार्य किन भयो ?
-के यो सव कार्य तपाईंलाई राष्ट्रिय नेता बन्नलाइ हो ?
– कि तपाईंको पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउनलाइ हो ?
-के बिगतमा भएको मधेशी-थारु-जनजाति आन्दोलन “भाड”मा गयो ?
-के बिगतको तपाईं आफ्नै कुरा बिर्स्नु भयो ? कहाँ गए “संशोधन होइन पुनरलेखन हुनुपर्यो” भन्ने तपाईंको त्यो भाषण ?
-अहिले ७५ औटै जिल्लामा संगठन छ भन्नू हुन्छ अनि आन्दोलन गर्दा कहाँ थिए ती संगठनधारीहरु ?
-लडाउने बेलामा मधेशी, मर्नेबेलामा मधेशी अनि अहिले म राष्ट्रिय नेता ! थौरैपनि लाज लाग्दैन है ?
-सुनसरीको बसन्तपुर स्थित प्रावी स्कुलमा बोलेको कुरा याद छ कि बिर्सनु भयो ? अनि अहिले कुन मुखले विभिन्न कुरा बोलेको नी ?
@जे होस् म एउटा आम मधेधी जनतालाई जवाफ चाहियो ! जवाफ चाहियो !! जवाफ चाहियो !!!